IiNtengiso zeeNtengiso zeeNdawo zokuThengisa - iRhwebo ngeArhente yePropathi yokuthengisa izindlu - realtyWW:
ezaposwa ngomhla Februwari 21, 2019 by U-Evans Walsh
Gqi beliswa: I-Feb 21, 2019 14: 46
Ungayifumana njani iAgent yeArhente yeTrasti? Iingcebiso ekufuneka uzilandele
Ewe, iiarhente zezindlu Ngaba ngabantu abaqhuba ukuthenga nokuthengisa iipropathi ezahlukeneyo. Kukho amawaka eearhente zezindlu nomhlaba ezithengiswayo, kwaye zonke zinobuchule kunye nobuchule bazo. Ezinye iiarhente zezindlu zinamava ngakumbi kwaye zidume kunabanye. Ayisiyiyo le kuphela, iiarhente zeearhente zeearhente zezindlu kunye nabo banamava kakhulu kwaye bahlawuliswa kakhulu ngabantu ngokunikezela ngeenkonzo. Kodwa eyona nto iphambili kukuba ukufumana iinkonzo kumthengisi onamava kunye nodumileyo wezorhwebo uxabisa ngaphezulu kunabanye.
Ngamanye amagama, iiarhente zentengiso yezezindlu ngabantu abamele abathengi kunye nabathengisi beepropathi zabo. Zimbini iintlobo zearhente ethengisa izindlu nomhlaba, enye yearhente yomthengisi ize enye yesibini ibe ngumthengi womthengi. Ke, kunyanzelekile ukuba abantu bazi yonke into ngokufanelekileyo malunga nabo ukuze baqashe eyona arhente yeyona ndawo intle. Ukuba abantu bazazi zonke izinto kakuhle malunga neearhente, ke yonke inkqubo iba lula yinkqubo yokuqesha iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba. Qhubekeka ukufunda →
exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi | ephawulweyo Ungayifumana njani iAgent yeArhente yeTrasti? Iingcebiso ekufuneka uzilandele | Ushiye uluvo |
ezaposwa ngomhla Oktobha 12, 2017 by UAlice Porter
Gqi beliswa: I-Oct 12, 2017 08: 30
Unokuzizinzisa njani njengoMthengisi wePropathi:
Siphila kwihlabathi elinabantu abaninzi, sabelana ngeengcinga ezifanayo nezethu, ukuba ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba abantu bakhuphisana abathengi kunye nabaxumi. Oku kunjalo nakubantu abakumhlaba wepropathi. Zininzi kakhulu iiarhente zabucala ezininzi kunye neenkampani ezinkulu ezinikezelwe kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba, kangangokuba abantu abakwisikhundla apho banexesha elinzima lokuzisungula kwaye bafumane iinkonzo zabo zaziwa kubaxumi abanokubakho. Nazi ezinye zeengcebiso ezilungileyo ukuziseka njengearhente yearhente yokuthengiswa kwezindlu… Qhubekeka ukufunda →